Uhlelo lwe-American Indian Commerical Tobacco Program - 802Quits
Kungani Kunzima Ukuyeka Ugwayi
Yenza Uhlelo Lwe lokuyeka
Thola Usizo Lokuyeka
Amalungu we-Medicaid / angaqinisekisiwe
Amapeshi wamahhala, i-Gum namaLozenges
Amathuluzi Okuyeka Ukuzijabulisa
Ungaziphatha Kanjani Izifiso
Ama-Vermonters NGIFUNA UKUYEKA AmaNdiya aseMelika
UTHOBO LWAMAHHALA WEZOTHOBO LUYEKA USIZO
Ukusetshenziswa kwendabuko kagwayi emasikweni aseMelika aseNdiya kwehluke kakhulu kunokusetshenziswa okukhuthazwa ngabakhiqizi bakagwayi bezentengiselwano. Amaphesenti angalingani amaNdiya aseMelika asebenzisa ugwayi wezentengiselwano uma kuqhathaniswa namanye amaqembu e-United States. Izinkampani zikagwayi ezentengiselwayo zikhombe amaNdiya aseMelika ekumaketheni, ekuxhaseni imicimbi nokunikezwa, zakha amasu okukhuthaza futhi zisebenzisa kabi izithombe nemiqondo evela esikweni laseMelika laseNdiya.
Njengezinye izinto eziluthayo, uma ugwayi uhlukunyezwa noma usetshenziselwa ukuzijabulisa, uyingozi. AmaNdiya aseMelika asebenzisa ugwayi ngokwesiko ayakuqonda lokhu futhi anciphisa ukusetshenziswa kwawo ngezinjongo zomkhosi kuphela. Izindaba zokuthi kungani ugwayi wanikwa amaMelika Omdabu ngemithandazo ziye zadluliselwa ezinkulungwaneni zeminyaka. Ukusetshenziswa kukagwayi wendabuko kusiza ukudala ukuxhumana nezizukulwane zakudala futhi kusekela impilo enhle nomphakathi onempilo wanamuhla nasesikhathini esizayo.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ugwayi wendabuko nokusetshenziswa kwayo
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ugwayi wezohwebo
UHLELO LWEZITHO ZAMABHIZINISI WASE-AMERICAN
Ukuyeka ugwayi wentengiso kungaba nzima, kepha usizo luyatholakala. Bhalisela uhlelo lwe-American Indian Commercial Tobacco Programme ukuthola usizo lwamahhala, olwenzelwe amasiko ukuyeka ugwayi, kufaka phakathi:
Izingcingo eziyi-10 zokuqeqesha ezinabaqeqeshi bomdabu abazinikele
Uhlelo lokuyeka ngokwezifiso
Kuze kube amasonto ayisishiyagalombili ama-patches amahhala, insini noma ama-lozenges
Ukugxila ekusetshenzisweni kukagwayi wentengiso, kufaka phakathi ugwayi ongenantuthu
Usizo olwenzelwe ukuyeka luvuleleke kubo bonke abantu bomdabu baseVermont, kubandakanya nentsha engaphansi kweminyaka engu-18
I-American Indian Commercial Tobacco Quitline yathuthukiswa ngempendulo evela kumalungu esizwe ezifundazweni eziningi.
Indaba Yomama Wommbila
Shayela inombolo yamahhala 1-855-372-0037 ukuxhuma ngqo nabaqeqeshi boHlelo Lokuhweba Ngogwayi waseMelika.
Abaqeqeshi aba-3 bathatha izingcingo ngoMsombuluko-ULwesihlanu, ngo-8: 30 ekuseni - 9 pm EST.
Ungafinyelela futhi kubaqeqeshi boHlelo lwaseMelika lwaseMelika Lokuhweba Ngokushaya ucingo 1-800-YEKA-MANJE.
Vakashela le Uhlelo lwaseMelika lwaseMelika lokuThengisa Ugwayi Iwebhusayithi.
Finyelela izinsizakusebenza ezingeziwe kufaka phakathi amabhodi emiyalezo, izinto zokufunda, ukuhlelela uhlelo lokuyeka ngokwezifiso nokuyeka ukulandelela inqubekela phambili.
Ukuze ufunde kabanzi ngogwayi namasiko nokufinyelela kuzinsizakusebenza eziningi, vakashela Yigcine Ingcwele: Inethiwekhi Yomdabu Kazwelonke .
Lapho ama-802Quits ekhomba ngogwayi kule webhusayithi, sibhekisa kugwayi wentengiso, wenzelwa inzuzo okhiqizelwa ukuzithokozisa nokujwayela hhayi ugwayi ongcwele nowendabuko ongasetshenziselwa izinhloso zemikhosi noma zokwelapha eminye imiphakathi yaseMelika yaseMelika.
© 2020 UMNYANGO WEZEMPILO WASEVERMONT.
UMtapo Wezincwadi Wevidiyo